Beddelaan Flash in HTML 5
The Flash ku salaysan videos dhaqanka (ku kordhin .FLV) waxay ku jiraan encoded midkood Spark Sorenson ama VP6 qaabab riixo video, oo ma taageersana ay inta badan ciyaartoyda video hadda ama telefoonada gacanta. Taas lidkeeda, videos Flash ku salaysan waa mid ka mid ah qaabab video caadi gundhig on YouTube iyo goobaha kale ee caanka ah online sida. Sidaa darteed, waxa uu si weyn lagu talinayaa in la badalo ka videos Flash ku salaysan in qaab video HTML 5-ku salaysan si loo hubiyo in loo maqli karo siman ama ujeedooyin tafatir dheeraad ah.
Waa maxay Flash?
Waa maxay HTML 5?
Flash ku salaysan Video
Waa qaab file video abuuray oo soo bandhigay by Adobe (markii hore ee ay soo Macromedia), laakiin ay taageero Adobe Flash Player joojiyo ka dib on. Si kastaba ha ahaatee, arkaysid a video Flash ku salaysan waa in aanay noqon dhibaato weyn innaga dhammaanteen u bixiyey, sida web browser fur-in si fudud loo soo bixi karaa iyo lagu rakibay. Haddii kale, waxaa kale oo jira fara badan Flash free video ciyaartoyda ku wareegsan, meesha ugu sareysa ee codec ah oo kaa caawin kara in la dhamaystiro waafaqsan qaab file ah oo aad ciyaaryahan video hadda sida FFDShow iyo FLV codec plugin .
HTML 5-salaysan Video
The videos HTML 5-salaysan yihiin qaabab video in uu noqon karaa mid loo maqli natively on browser ah (ka dib dheer ee element video a) ama wax kasta oo kale ciyaartoyda video iyo Qalabka telefoonada gacanta oo aan u baahan wax kasta ka siib-tago oo dheeraad ah,-socodka ama codec. Si kastaba ha ahaatee, ku qaabab video taageeray weli way kala duwan yihiin sida aad dooratay ee browser, ciyaaryahanka video ama qalab mobile. Waxaa hadda jira 3 duwan HTML 5-saleysan qaabab video in ay taageerayaan,
Weelka MP4 ee la H.264 + AAC
Weelka OGG ee la Theora + Vorbis
Weelka WebM ee la VP8 + Vorbis
Out of 3 weyn ee ah qaabab video, video files lagu kaydiyaa weel MP4 ah, encoded la codec H.264 video iyo AAC codec audio, waa doorashada ugu caansan. Sababta ugu weyn ee qabka, waxa uu aqoonsan yahay oo playable ku dhawaad ​​99.9%, haddii aan qalabka oo dhan. Sidaas, waa ay fiican tahay in aad encode qaabab aad video in MP4 (H.264 + AAC).
HTML 5 ka badan Flash
Flash video ciyaartoyda aan dheer oo ay taageerayaan Adobe
Videos Flash ku salaysan ma aha natively la jaan qaada qalabka Apple
Videos Flash-ku-saleysan u muuqdaan in ay kululeeyaan Qalabka telefoonada gacanta si dhakhso ah oo sidaas, daadi batteriga
Videos HTML 5-saleysan u baahan yahay ma rakibo dheeraad ah
HTML 5-salaysan videos waxaa helo doorashada guud ahaan iyo taageero iyo sidoo kale la jaan qaada qalabka ugu badan ee loo maqli karo
HTML 5-salaysan video The Standard-furan in si weyn loo hagaajin karaa (ama dhiiri-abuurnimo) oo ku salaysan horumarinta iyo waayo-aragnimo user ee halkii hab ku lifaaqan ama ku badan Adobe
Halkii baaba'iyo oo dhan aad videos Flash ku salaysan ama dareemay waajib ku ah in iyaga loogu badalo qaab file video ah in aadan door bidaan, weli waxaad haysataa fursado kale oo ay u tijaabiso. Si fudud guji madax hoose si aad u aragto waxa aad sameyn kartaa adiga oo videos Flash-ku-saleysan.
Players Web Video
Waxaad kala soo bixi kartaa oo rakibi kale ciyaartoyda video in ay awoodi karto in ay aqoonsadaan iyo taageero qaabab file FLV halkii adiga oo isticmaaleya isticmaale ciyaaryahan video defaulted.
Xulashada 1. Wimpy Desktop FLV Player
Aadka u dabacsan oo customizable
Ads oo ku dahaadhaa (baaritaan pop) la galin karaa
Awoodaha Ajax dhisay-
Fiiri Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Desktop Wimpy ka FLV Player.
Xulashada 2. FLV - Media Player
Taageerada aad u qaabab kale file video
Fiiri Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan FLV - Media Player .
Xulashada 3. FLVPlayer4Free
Screen Qabsashada ogol yahay
Kartida aad u ordaan files duwan oo isku mar
Fursadaha amarka la taaban karo iyo badhamada
Fiiri Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan FLVPlayer4Free .
Shakhsiyeeyo ciyaaryahan video web aad ka jeelahay shakhsi, korkiisa diinta ka videos Flash ku salaysan in HTML 5 oo weli fursad u haysataa in dib video ciyaaryahan FLV-socon dhici waqti isku mid ah.
Xulashada 1. Kaltura Player
Player Jihaynta leh fur-tago
Muuqaalka customizable iyo muuqaalada
Qalabka Integration sida la adkaynayo xeerarka, widgets iyo iwm
Fiiri Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Player Kaltura .
Xulashada 2. Projekktor
Socon iyo taageerada VLC ee web fur-in
Mawduucyada kala duwan la heli karo in uu u qaabeeyo fursadaha toolbar
Kala duwan oo ka siib-tago ka slideshow in subtitling, goobta la wadaago bulshada iyo iwm
Fiiri Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Projekktor .
Xulashada 3. SublimeVideo
Waxaa la dhisay-in naqshado ciyaaryahanka la khariidad ka jawaabaan
Qarni Fast, lagu kalsoonaan karo oo si fudud video tags
Fan Auto iyo qaybsiga bulshada gal dhufto ee caanka ah
Fiiri Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan SublimeVideo .
The xal ugu boosaska badan waa in ay doorato app ah ciyaaryahanka video dibadda in taageeri karaan noocyo kala duwan oo qaab aqbasho.
Xulashada 1. RealPlayer Cloud
Helitaanka kaydinta Cloud waayo, kaydinta ama la wadaago
Voice amar video search
Kartida aad u videos bookmark
Fiiri Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Cloud RealPlayer .
Xulashada 2. VLC Media Player
Taageerada kale qaabab video badan oo loo dhan yahay ee DVD-
Saamiga Aragti, audio iyo iwm waxbaa laga beddeli karaa
Hargahood oo isbedel
Fiiri Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Media VLC Player .
Xulashada 3. Wondershare Player
Kala iibsiga joogtada ah ee files qalabka kale
Bookmark videos jecel yahay ama taxanaha TV
Ka saar xayeysiis dhibsado. ama baaritaan pop
Fiiri Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Wondershare Player .
Top 10 FREE Video converters for Windows (Windows 10 ka mid ah)
Sida loo Beddelaan Panasonic MTS M2TS Files in qaab kasta oo si fudud oo dhaqso
Sida loo isticmaalo Google Play Music on iPhone, iPad, iPod
Sida loo Waraaqda MP3 Qaabka Audio ka Wmv Video Files
Sida loo Beddelaan VOB in QuickTime MOV ee Mac OS X Libaaxa / Windows
> Resource > Beddelaan > Beddelaan Flash in HTML 5